Beenta iskuullada lagu barto | HimiloNetwork
A teacher writes on the blackboard during class in a primary school in Berlin December 7, 2010. The three-yearly OECD Programme for International Student Assessment (PISA) report, which compares the knowledge and skills of 15-year-olds in 70 countries around the world, ranked Germany in the middle field for reading skills and above the OECD-average for mathematics and natural sciences. Teenagers from the Chinese city of Shanghai have the best education in the world, according to the major international study. AFP PHOTO / JOHN MACDOUGALL (Photo credit should read JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images)
Posted by: Zakariya in Faallooyinka March 6, 2017	0 689 Views
Muqdisho (Himilonews) –
Sheekada Isaac Newton iyo tufaaxa.
Waa laga yaabaa inaad maqashay ama lagaaga sheekeyay markii aad dugsiga dhexe ama sare dhiganaysay sheeko kusaabsan markii uu Isaac Newton (25 December 1642 – 20 March 1726) uu fadhiyay geed Tufaax ah hoostiisa markii uu ogaaday inuu jiro cufis jiidadka dhulka “universal gravitation.” .
Kadib markii ay madaxa ugasoo dhacday mir ama xabad tufaax ah oo geedka kasoo go’day , dabadeedna uu bilaabay inuu kafakaro sababta ay mirtu kor u aadiwayday oo markasta oo uu kor utuurana ay hoos uun ugusoo laabanayso ! markii uu sidaas dhawr jeer sameeyay kadibna uu daahqaaday cilmigan cufisjiidadka dhulka , tasoo lamicno ah inay ah inay cilmi baaris kadis ahayd.
Laakiin waxaas oo dhan waa been , runta ayaana ah in Newton ay kuqaadatay mudo kudhaw 20 sano si uu xaqiiqda cilmigan ugaaro , sidoo kale waxaa jiray culimo kale oo dhanka sayniska ah oo uu caawimaad kahelay Christopher Wren, Robert Hooke iyo Edmond Halley.
Columbus ayaa ogaaday inuu dhulku usamaysan yahay qaab ukumeed.
Sheeko kasta oo nagasoo gaartay ama kusaabsan Christopher Columbus (Italian) waxay ubadan tahay been ama mid laga badbadiyay. waxaa laga yaabaa inaad hore umaqashay Columbus ayaa helay qaaradda America toosoo aanan waxba kajirin maadaama kumanaan sano hortii isaga ladaganaa qaaradaas .
Sidoo kale fikraddan ah in ninkani uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee ogaada inuu dhulku usamaysanyahay qaabka ukunta (wareegsan) oo kale oo ah mid dugsiyo badan lagu dhigo waa mid aysan waxba kajirin.
Xaqiiqduna waxay tahay in aadanuhu ay 2000 oo sano kahor xitaa ogaayeen inuu dhulku ahayn mid fidsan , sida laga dheehday raadad cilmi ahaa oo ay katageen xadaarado dhawr ah kumanaan sano kahor , sidoo kale waxaa fikraddan hore uga hadlay xisaabyahano Greek iyo Muslimiin isugu jiray oo noolaa boqolaal sano kahor taariikhda miilaadiyada.
Columbus-na waxaaba jirtay inuu xitaa fikir khaldan kahaystay cabirka dhulka oo uu aaminsanaa inuu sida hadda kayar yahay, hayeeshee tani waxay kamid tahay beenaha hirgalay walina dugsiyada lagu dhigo.
Diamond-ku asal ahaan waa Dhuxul Dhagax .
Dad badan ayaa rumaysan in dheemantu ay markii hore ahayd ama ugu yaraan kasamaysan tahay dhuxul dhagax , laakiin waa been kale oo laga yaabo inaad kusoo baratay dugsiga.
Dheymantu asalka waxay kasamaysantaa macadin dhulka hoostiisa laga helo neefta carbon ka ayaase qaybta ugu badan ka ah , waxaana inta badan sameeya qaybta kore ee dhulkana keena folkanooyinka dhulka hoose kadhacaya.
Fikraddan isla xiriirinaysa labadan shayna waxaa beeninaya xaqiiqda ah in marka horeba ay nadir/dhif tahay in labadan shay isku meel laga helo.
Bini’aadanku waxay kasoo jeedaan xayawaanka Daanyeerka.
Waxa laga yaabaa inay tahay beentii ugu saamaynta badnayd marka laga eego beenaha kudhex milmay manaahijta waxbarashada , waana fikrad mudo soo jirtay in badanna lasoo baranayay , taasoo asalkeeda uu lahaa ninkii fool xumada lagu xaman jiray ee Charles Darwin (12 February 1809 – 19 April 1882) kaasoo dhanka kale ahaa nin wax badan kusoo kordhiyay cilmiga barashada noolaha ee Biology-ga gaar ahaan xiriirka kadhexeeya noolaha iyo sida ay usoo farcameen.
Charles oo cuskanaya jiritaanka astaamo aanan badnayn oo laga yaabo inay wadaagi karaan Bini’aadanka iyo qayb kamid ah Danyeeradu ayaaa hormariyay fikradiisan dad bandanna kumarin habaabiyay , taasoo xitaa gaartay heer lagu doodi karo xitaa nolosha manta ee ay ilbaxnimadu jirto horumarka waynna lasameeyay .
Islaamka ayaase hotiiba kahadlay meesha dhabta ah ee ay kazoo farcameen Binu’aadanku oo ah inay bini’aadanku kazoo wada jeedaan Aabahood aadam oo isagana laga abuuray ciidda , waana sida ugu saxan xaqiiqduna aytahay taasoo aan mudnayn in cadaymo kale loo raadiyo.
5. Albert Einstein wuxuu kudhacay xisaabta.
Waa fikrada si uun kusoo gashay manaahijta waxbarashada, hayeeshee ay ubadantahay in ujeedka laga lahaa ay ahayd in lagu dhiirigaliyo dadka waxbaranaya gaar ahaan xisaabta , aragtidan oo soo bilaabatay intii uu noolaa Caalimkan Xisaabta iyo physics ka yaqaanay , ayaa waxaa jirtay in mar lawaydiiyay Einstein laftigiisa su’aal ahayd miyaad kudhacday xisaabta?
Waxa uuna intuu qoslay sheegay inuu horaanba kuhelay shahaado sare xisaabaadka differential iyo integral calculus isagoo 15 jir ah .
Arin kale oo lasheego ayaa ah in ay jireen maadooyin uu ku liitay ninkan taasoo suurtagal noqon karta maadaama uusan qofna kuu fiicnaan Karin maadooyin ka oo idil.
Waxaa isku soo ururiyay; Axmed Keyse Maxamed Cabsiiye. Waana aragti isaga gaar ku ah. Mana ka turjumeyso aragtida http://himilonetwork.com://himilonetwork.com.
Kala xiriir qoraha: farriin-danabeedkiisa; Ahmedumohamedi@gmail.com
Previous: 800 Qoysas Muslimiin Hindi ah oo dib u celinaya Meherka
Next: Nin afadiisa gubay markii sawir dhigtay barteeda facebook
Maalinta Caalamiga ee Iskaashatooyinka.
Koox ku dabaal-degaysa sawir muujinaya dulqaadka diimeed ee Induniisiya.
Muslim – si uu bulshada u fahamsiiyo Islaamka – Shaqadiisa uga go’ay!